Dagaal laga cabsi qabo inuu kadhaco Cadaado | Wardoon
Home Somali News Dagaal laga cabsi qabo inuu kadhaco Cadaado
Dagaal laga cabsi qabo inuu kadhaco Cadaado
Magalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay kadib markii Ciidamo ka tirsan kuwa NISA ay xalay la wareegeen Xarunta Madaxtooyada Galmudug ee Magalada Cadaado.
Ciidamadaas ayaa mas’uuliyiin ka tirsan Galmudug waxa ay sheegeen inay tahay mid fowdo looga abuurayo deegaanada Galmudug,islamarkaana si awood ah ay kula wareegeen Xarunta Madaxtooyada Galmudug ee Magalada Cadaado.
Jawiga Magalada Cadaado ayaa Maanta ka duwan sidii shalay,waxaana ku sugan Ciidamada Nabadsugida qeybta Galmudug iyo kuwo ka tirsan Daraawiishta Galmudug oo horay Gacanta ugu haayay Xarunta Madaxtooyada.
Arrintaan ayaa dad badan waxa ay aaminsan yihiin inay salka ku heyso khilaafka weli ka dhex taagan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Madaxda Galmudug,iyada oo sidookale ay jirto in Madaxda Galmudug khudhooda uu khilaaf ka dhex jiro,isla markaana ay kala degan yihiin Magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb.
Qaar ka mid ah waxtgaradka Magalada Cadaado ayaa waxa ay u sheegeen inay xiisadaas ku baxeen,islamarkaana ay doonayaan in dagaal uusan Magalada ka dhicin,waxaana Maanta Magalada Cadaado laga dareemayaa xiisadaas.
Previous articleDAAWO:-Galmudug oo Jawaab kulul ka bixisay Weerar Xalay ay Ciidamada Nisa kuqaaday Cadaado
Next articleDAAWO:-Hogaamiye dhowr bilood ka hor la shaaciyey in la dilay oo Video soo diray
Qarax ismiidaamin ah oo goor dhow ka dhacay Dhuusamareeb
DAAWO :-Bacadlaha xoog baanu kuraraynaa